July 2019 – News Portal
July 29, 2019 epradeshLeaveaComment on रगत दिने भन्दा माग्ने धेरै
घोराही, १२ साउन । हिजोआज रगतको माग बढ्दै छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा विभिन्न समूहको रगत आवश्यक प¥यो भनेर धेरै अनुरोध गरिएका हुन्छन् । तर त्यसको अनुपातमा रगत दानहरु निकै कम छन् । कसैले रगत आवश्यक प¥यो भने एउटै व्यक्तिलाई दोह¥याई, तेह¥याई रगतदान गर्नको लागि अनुरोध गरिन्छ । रगतदान गर्नको लागि नयाँ तयार बनाउन सकिरहेको छैन् । रगतदानको बारेमा सचेतनाको कमि होस् […]
प्रक्रियामै सीमित नयाँ सिसी क्यामरा
July 29, 2019 epradeshLeaveaComment on प्रक्रियामै सीमित नयाँ सिसी क्यामरा
तुलसीपुर, १२ साउन । बजारक्षेत्रको शान्ति सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै जडान गर्ने भनिएका सिसी क्यामरा लामो समय बितिसक्दा पनि जडान हुन सकेका छैनन् । पुराना सिसी क्यामरा बिग्रिएर बेकामे भएको अवस्थामा नयाँ सिसी क्यामरा जडान गर्ने विषय अहिले प्रक्रियामै सीमित रहेको छ । भएका सिसी क्यामरा बेकामे र नयाँ प्रक्रियामै सीमित हुँदा बजारक्षेत्र असुरक्षित बन्दै गएको नागरिकहरुको गुनासो छ । […]
कोलेनिकामा साढे दुई अर्ब राजस्व संकलन
July 29, 2019 epradeshLeaveaComment on कोलेनिकामा साढे दुई अर्ब राजस्व संकलन
घोराही, १२ साउन । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दाङमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा साढे दुई अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । एक वर्षको अवधिमा संघ र प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमार्फत प्राप्त झण्डै साढे २ अर्ब बराबरको राजस्व संकलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कोष […]
July 29, 2019 epradeshLeaveaComment on लायन्स क्लव अफ दाङको अध्यक्षमा केसी
तुलसीपुर, १२ साउन । लायन्स क्लव अफ दाङको अध्यक्षमा यज्ञबहादुर केसी चयन भएका छन् । क्लवको आइतबार तुलसीपुरमा भएको अधिवेशनले अध्यक्षमा केसीलाई चयन गरेको हो । क्लवको प्रथम उपाध्यक्षमा हेमन्त डाँगी, द्वितीय उपाध्यक्षमा सुरेश हमाल, तृतीय उपाध्यक्षमा गणेश अधिकारी, सचिवमा भागवत घिमिरे, सहसचिवमा दोर्ण देवकोटा र कोषाध्यक्षमा लोकबहादुर केसी चयन भएका छन् । आइतबार वर्ष २०१८/१९ का अध्यक्ष उमेशचन्द्र […]
वर्तमानमा समय क्रियाशील २१औँ शताव्दी पनि मध्यभागमा आईसकेको छ । यो समयसम्म आईपुग्दा समय धेरै अगाडि बढिसकेको छ । मानव समाजले धेरै फड्को मारेको छ । मानिस जीउनको लागि सीप जाँगर, मेहेनत गर्न सक्ने कोही पनि गरिब हुनुपर्दैन । पीडामा बाँच्नु पर्दैन । तर मानी प्रायः आफ्नै कारण (लोभ, मोह, पाप) बोक्नै नसक्ने, थाम्नै नसक्ने गरी विना गन्तव्यको यात्रा, विना […]
July 29, 2019 epradeshLeaveaComment on रोटरी क्लव अफ दाङको अध्यक्षमा पौडेल
घोराही, १२ साउन । रोटरी क्लव अफ दाङको अध्यक्षमा तीर्थ पौडेल चयन भएका छन् । बर्ष २०१८/१९ का अध्यक्ष डा. निरन्जन आचार्यले बर्ष २०१९÷२० का लागि पौडेललाई बर्ष पद हस्तान्तरण गर्दै रोटरी क्लव अफ दाङमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको हो । क्लवका प्रेसिडेण्ट इलेक्टमा डा. चेतनारायण पाण्डे, प्रेसिडेण्ट नोमिनीमा रजिव उल्लाह खान, उपाध्यक्षमा प्रदिप सुबेदी, […]
घर–घरमा योगः नगर प्रमुख पाण्डे
July 29, 2019 epradeshLeaveaComment on घर–घरमा योगः नगर प्रमुख पाण्डे
तुलसीपुर, १३, साउन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले नगरबासीहरुलाई स्वास्थ्य बनाउन आफूले यस बर्ष ‘टोल–टोलमा योग घर–घरमा योग’ भन्ने अभियान अघि सारेको बताएका छन् । उनले नगरबासीहरुलाई सुखि, समृद्धि र खुशी बनाउन आफूले विभिन्न माध्यमबाट भूमिका खेलिरहेको बताए । आइतबार पतञ्जली योग रोग निवारण केन्द्र पार्टी प्यालेस तुलसीपुरले आयोजना गरेको सामूहिक योग शिविरको […]
६० बिगाह क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण
July 29, 2019 epradeshLeaveaComment on ६० बिगाह क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण
घोराही, १२ साउन । दाङमा यसबर्ष करिब ६० विगाह क्षेत्रफलमा विभिन्न प्रजातीका बिरुवाहरु रोपिने भएको छ । बर्षा सुरु भएसँगै विरुवा रोप्ने कार्य जारी रहेको डिभिजन वन कार्यालय घोराहीले जानकारी दिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय दाङका वन अधिकृत दीपक ज्ञवालीका अनुसार ६० बिगाह खाली जग्गामा साढे चार लाख भन्दा बढी बिरुवा वितरण भैसकेको छ […]
पर्यटन विकासका योजनाको अध्ययन
July 29, 2019 epradeshLeaveaComment on पर्यटन विकासका योजनाको अध्ययन
घोराही, १२ साउन । घोराही उपमहानगरपालिकामा रहेको पर्यटन तथा संस्कृति प्रवद्र्धन शाखाले चालु आर्थिक बर्षमा चार योजनाको सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । नगर कार्यपालिकामार्फत स्वीकृत गरेर चारवटा योजनाको सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने भएको हो । पर्यटकीय सम्पदाको अध्ययन तथा सम्भाब्यता अध्ययनका लागि बबईको बहुआयामिक अध्ययन तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धी गुरुयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । […]
July 29, 2019 epradeshLeaveaComment on ठगी गर्नेलाई कारवाही गर
ठगी, चोरी, तस्करी, जालझेल, फटाईगिरी अहिले यत्रतत्र रहेको छ । सबै क्षेत्रमा यस्ता खालका प्रवृति देखिएका छन् । गाउँ सहर, पहाड तराई हिमाल सबै क्षेत्र सबै वर्ग समुदायमा अहिले ठगी मौलाएको छ । झुट चोरी त्यतिकै रहेको छ । दाङमा पनि एउटा यस्तो घटनाको सार्वजनिक भएको छ की एकजना महिला एक करोडभन्दा बढी रकम ठगेर फरार रहेको विषय सार्वजनिक […]